पाकिस्तानका हिन्दू युवाले गरे कमाल
काठमाडौं, ४ असार– पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको उमेरकोट जिल्लाका राजकुमार गुर्जर आजभोलि चर्चामा छन् । पाकिस्तानमा ट्वीटरमा पनि उनी ट्रेण्डमा छन् ।
राजकुमारले हालसालै वाशिंटनमा इमर्जिङ योङ लिडरको अवार्ड जितेका थिए । अमेरिकी स्टेट डिापार्टमेन्टले यस अवार्डको दोस्रो संस्करणमा अलग अलग देशका १० जनालाई पुरस्कार दिएको छ ।
अवार्डका साथ राजकुमारलाई १० हजार डलरको पुरस्कार दिइएको छ ।
राजकुमार पहिलो पाकिस्तानी हुन् जसले यो अवार्ड पाएका छन् । पाकिस्तानी समाचार द एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार उनी पास्तिान फर्किएर शान्ति, सद्भाव र शिक्षाका लागि काम गर्न चाहने बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । उनले पाकिस्तानका हिन्दु हुन् जसले गरिबी, शान्ति र सद्भावका लागि काम गर्ने जनाएका छन् । असार ४, २०७४ मा प्रकाशित
हातमा यस्तो चिह्न भएका व्यक्ति हुन्छन् सबैभन्दा भाग्यमानी !
सहगोत्रीसँग किन विवाह गर्नु हुँदैन ?
देउवालाई संकेत गदैं ओलीले भने, ‘खेल शुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन’ काठमाडौं, २ पुस– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेल शुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गरेजस्तै गरी वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनको बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन् । ...
ओलीले भने- राष्ट्रिय सभाको सदस्य सिफारिश ‘आउट गोइङ’ सरकारले होइन
ऋषि धमलाको प्रश्नमा प्रचण्डको इसारा, ओलीले दिए यस्तो जवाफ
दिपेश पुन अस्पतालबाट डिस्चार्ज
नयाँ सरकार गठनका लागि बखेडा नगर्न देउवालाई वामपन्थी गठबन्धनको आग्रह
समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न, एमाले पहिलो पार्टी बन्दा माओवादी तेस्रोमा सीमित